Nairobi Talaado 10 July 2012 SMC
MSF waxey ka hortageysaa shuban ka dilaacay magaalda Kismaayo ee koonfurta Soomaaliya oo saameeyey caruurta iyo dadka waaweyn. Waxaan maalin walba jiifinnaa bukaan hor leh. Kismaayo waa magaalo aad u dad badan sidaa darteed waxaa jirta khatar taasoo ah in cudurka uu si dhakhsi ah ugu faafo bulshada dhexdeeda.
2 ka mid ah shaqaalaha MSF ayaa laga afduubtay xerada Dhadhaab, dalka Kiinya bishii Oktoobar sanadkii hore, waxaana la aaminsanyahay in lagu haysto dalka Soomaaliya. Ilaa inta arintan laga xalinayo, balaarinta howlaha caafimaad ee MSF waxey ku eg yihiin ka hortagga xaaladaha degdegga oo kali, sida tan haatan ka jirta Kismaayo. Inkastoo MSF ay aad uga walwalsatahay shaqaalaheeda lagu haysta Soomaaliya in ka badan 9 bilood, hadana kama jeesan karno masuuliyadda anaga oo ah bixinta gargaar caafimaad ee baniaadamnimo, taas oo ah in bukaanka la daaweeyo marka ay jirto xaalad degdeg ah. Waxaan ka ugu baaqeynaa dhamaan Soomaalida leh karti ay kaga qeyb qaataan dadaalada siidaynta shaqaalaheena in ay doorkooda ciyaaraan oo si loo suurto geliyo sii deyn nabdoon ee xubnaha shaqaalaheena MSF.